Tic Tac Toe Glow 7.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး Tic Tac Toe Glow
Tic Tac Toe Glow ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာနေကြပါပြီ tac တိုး Play ။ ပဟေဠိဂိမ်းကစားရန်လိုအပ်ကြောင်းစွန့်ပစ်စက္ကူမရှိပါ! ယခုတွင်သင်သည်အခမဲ့အဘို့သင့်ကို Android device ကိုအပေါ်နေကြပါပြီ tac တိုးကစားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောခေတ်သစ်ဗားရှင်းတစ်ဦးအေးမြအလင်းရောင်ဒီဇိုင်းပုံပေါ်ပါတယ်။
ဒီပဟေဠိဂိမ်းတွေအတွက် AI အသင်မြင်မည်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကစားစတိုင်မှ adapts နှင့်အလွန်အမင်းခန့်မှန်းရခက်သည်။ စျေးကွက်ပေါ်ရှိအခြားနေကြပါပြီ tac တိုးဂိမ်းမတူဘဲသင်အမြဲ Glow နေကြပါပြီ tac တိုး AI အလတ်ဆတ်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သမျှသော AI အကျွမ်းကျင်မှုမပါလျှင်ဂိမ်းထဲမှာယင်ကောင်အပေါ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကကစားနေစဉ်အခက်အခဲတက် crank သို့မဟုတ်သင် cornered.This ပဟေဠိဂိမ်းရတယ်လျှင်ဆင်းထစ်နိုင်ပါတယ်လွန်းလေးတွေ & လူကြီးများအတွက်အကြံပြုသည်။
- လူပျိုနှင့်2ကစားသမား mode ကို (ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့်လူ့)
-3အခက်အခဲအဆင့်ဆင့်
Tic Tac Toe Glow အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Tic Tac Toe Glow အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Tic Tac Toe Glow အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Tic Tac Toe Glow အား အခ်က္ျပပါ
Tic Tac Toe Glow ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Tic Tac Toe Glow အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.6
ထုတ်လုပ်သူ Arclite Systems
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://arclitebd.com/?page_id=922
App Name: Tic Tac Toe Glow
Release date: 2019-06-04 01:12:49
လက်မှတ် SHA1: 99:A9:74:8C:3F:9F:FB:81:DB:AC:46:D6:B2:56:E4:59:ED:84:18:84
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Imdadul Hoque
အဖွဲ့အစည်း (O): Arcsys
Tic Tac Toe Glow APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ